Isilinganiso sokushintsha imali US dollar (USD) Ukuze Rand (ZAR) bukhoma ku-Forex exchange emakethe
Forex exchange rate olusha: 01/08/2021 11:56
US dollar - Rand Intengo manje kwi Forex exchange emakethe ngesikhathi 01 August 2021
11:56:15 (Forex rate buyekeza 59 imizuzwana)
1 US dollar kuya 14.60 Rand ekushintshanisweni kwe-Forex. Ukubuka kwe- US dollar manje ku-inthanethi. I-Instant US dollar. Ibonisa ushintsho lwesilinganiso se-forex ngomzuzu.
Ishadi Forex Ukuhweba Rand ukuze Dollar baphile 01 August 2021
Ishadi Forex Ukuhweba US dollar Ukuze Rand siphile, 01 August 2021
US dollar kuya Rand kulula ukubukwa eshadini. Igrafu ikhombisa ngokushesha ukuguquguquka kwe US dollar ku- Rand. Khetha iphoyinti eshadini ukuthola isilinganiso esiqondile sokushintshanisa nesikhathi esifanele. Igrafu yezinguquko ku- US dollar ku- Rand kuvuselelwa njalo.
Convert US dollar Ukuze Rand US dollar Ukuze Rand Isilinganiso sokushintsha imali US dollar Ukuze Rand exchange rate umlando
Online ukuhweba US dollar (USD) ukuze Rand okwamanje
Umlando wesilinganiso sokushintshana njalo ngemizuzu Isigaba se- US dollar sikhuphuke ngo- 0.01 ZAR ngomzuzu wokugcina. Isayithi libonisa itafula lokuthumela imizuzu eyi-10 ye US dollar ku- Rand umzuzu ngamunye. Ukuthumela okulula kolwazi ngesilinganiso seminithi esizeni.
Online ukuhweba US dollar (USD) ukuze Rand last Ukuhweba ihora
Njalo ngehora silandela US dollar kuya Rand. Ukwanda kwe- US dollar ( USD) ku- Rand kulelihora - 0.01 ZAR. Amanani we US dollar ku- Rand njalo ngehora kukhonjisiwe kuthebula kuleli khasi. Sinethebula lamanani emahoreni angu-10 wokugcina ukubukwa.
11:53 11:47 11:41 11:35 11:29 11:23 11:17 11:11 11:05 10:58
Online ukuhweba US dollar (USD) ukuze Rand mkhuba lanamuhla 01 August 2021
11:56 10:55 09:54 08:54 07:54 06:54 05:53 04:53 03:53 02:53